Maxaa ka cusub heshiiskii Ramos iyo Real madrid. Horyaalka Spain
Home Horyaalka Spain Maxaa ka cusub heshiiskii Ramos iyo Real madrid.
Maxaa ka cusub heshiiskii Ramos iyo Real madrid.
Ramos iyo Madrid ayaa isku dhegan waxaana meel u dhicin heshiiska Kooxda iyo Ramos waxana la filayaa inuu heshiiska qandaraaska usixiixo Naadiga iyadoo wargeystada qorayaan cabsida laga qabo inuu kooxda ka huleeli doono xagaaga soo aadan sida laga soo xigtay Cadena Ser.
Ramos ayaa kaliya heshiis cusub la gali doona kooxda Los Blancos hadii ay ogolaadaan inay sii wadaan bixinta mushaarkiisa 12 milyan euro sanadkii, laakiin kooxda ma awoodi karto inay ka soo baxdo dalabkiisa jawiga dhaqaale ee haatan hada jira.
34-sano jirka heshiiska uu haatan ku egyahay xagaaga, waxaana si aad ah loola xiriiriyay inuu u dhaqaaqo kooxaha ka dhisan Premier League.
Previous articleDavid Alaba oo maanta ku dhawaaqay Kooxda uu ku biirayo
Next articleMartin Odegaard ayaa albaabada u furay inuu sii joogo Arsenal waqti dheer